Sweden: Gawaari gaashaaman oo laga xaday xero ciidan!. - NorSom News
Sweden: Gawaari gaashaaman oo laga xaday xero ciidan!.
Laba ka mid ah baabuurta aysan xabbaduhu karin oo gaashaaman oo ay leeyihiin ciidammada dalka Sweden, ayaa laga xaday goob milateri oo ku taala magaalada Enköping. Mid ka mid ah gawaarida ayaa laga helay banaanka magaalada Västerås. Halka midkii kale aan weli gacanta lagu dhigin.
Xatooyadan ayaa la ogaaday gelinkii dambe ee arbacadii shalayto, iyadoona uu ciidanka ammaanku baaris ku sameeyay goobtii gawaarida laga xadey gelinkii hore ee khamiista maanta.
– Mid ka mid ah labadii gaari ee la xaday ayaa la heley, sida uu sheegay Jesper Tengroth, ahna gacan yare ka howl gala laanta saxaafadda ee wasaaradda difaaca.
Previous articleXaaska madaxweynaha Lesotho oo loo haysto dilka xaaskii hore ee madaxweynaha.
Next articleAjaaniibta uu akhriska ku adagyahay oo aan helin caawintii ay xaqa u lahaayeen, marka ay galayaan imtixaanka Norwiijiga.